४० हजार फिट उचाइमाथिबाट जापानमा राष्ट्रिय ध्वजा फहराउँदा, दुनियाले देख्नेछ, नेपाली राष्ट्रिय झण्डा देशको गौरव ! - Nepal Insider
Home/अन्तर्राष्ट्रिय समाचार/४० हजार फिट उचाइमाथिबाट जापानमा राष्ट्रिय ध्वजा फहराउँदा, दुनियाले देख्नेछ, नेपाली राष्ट्रिय झण्डा देशको गौरव !
४० हजार फिट उचाइमाथिबाट जापानमा राष्ट्रिय ध्वजा फहराउँदा, दुनियाले देख्नेछ, नेपाली राष्ट्रिय झण्डा देशको गौरव !
कदलका सदस्यले २७४ सिट क्षमताको ‘मकालु‘ नामकरण गरिएको वाइड बडी जहाज जापानमा सफलताका साथ अवतरण गराएको हो ।कन्साई विमानस्थलमा जहाज अवतरणपछि प्रफुल्लित मुद्रामा देखिनुभएका कप्तान रिजालले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको विमानस्थलमा विमान अवतरण गराउनु कुनै असहज नभएको र यसले नेपाली विमानचालक संसारका प्रतिष्ठित चालकभन्दा कम छैनन् नेपालीले पनि आकास यात्रामा विश्वलाई प्रतिस्पर्धा गर्नसक्छन् भन्ने दरिलो सन्देश प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
मौसमले साथ दिने हो भने काठमाडौँ ओसाका उडान रुट प्राविधिक हिसाबले कुनै कठिनाइ नहुने कप्तान रिजालको भनाइ छ । उहाँका अनुसार ३९ हजारदेखि ४१ हजार फिट उचाइमा वाइड बडी उडाइएको थियो । जहाज काडमाडौँ इण्डियन एक्सप्रेस हुदैँ बङ्गलादेश पुगेर पुनः म्यानमा, चीन, दक्षिण कोरिया हुँदै जापान पुगेको थियो ।झण्डै १२ वर्षको अन्तरालपछि निगमले जापानको ओसाका सिधा उडान शुरु गरेको हो । यसअघि अक्टोबर ३० सन् १९९४ निगमले ओसाका उडान शुरु गरेको थियो । सो बेलाको उडान काठमाडौँ र चीनको साङ्घाई हुँदै जापानको ओसाका थियो । अप्रिल १२ सन् २००७ मा जहाज अभाव भएको भन्दै निगमले ओसाका उडान बन्द गरेको थियो ।
निगमका उडान सञ्चालन निर्देशक क्याप्टेन दिपुराज ज्वारचनले ११ महिनाको अथक प्रयासपछि ओसाका उडानलाई निर्धारित समयमै उडान गर्न सफल भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार शुरुमा सातामा तीन दिन र पछि क्रमशः बढाउँदै लगिनेछ । सन् २०२० जनवरी १ देखि जापानकै नारिता इन्टरनेशनल एयरपोर्टमा उडान सञ्चालन गर्ने तयारी भएको र बजार हिस्साका हिसाबले गन्तव्य व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो ।नयाँ गन्तव्यमा उडान गर्दा शुरुमा समस्या हुने भएपनि उडान निरन्तरता भए भविष्यमा राम्रो हुने निगमको अपेक्षा छ । निगमले शुरुमा भारतको मुम्बई र थाइल्याण्डको बैंकक उडान गर्दा निगमलाई बजार हिस्सा ओगट्न झण्डै एकवर्ष लागेको थियो ।
निगमका वाणिज्य निर्देशक टङ्कनिधि दाहालले सेप्टेम्बर महीनाभरि यात्रुको अभाव हुने र त्यसपछिका उडान राम्रो हुने उल्लेख गर्नुभयो । चीनको बेइजिङ, साङ्घाई, बङ्गलादेश, म्यानमा, भियतनाम र श्रीलङ्का उडानका लागि बजार अध्ययन भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।निगमले साताको तीन दिन बिहीबार, शनिबार र मङ्गलबार ओसाकाको नियमित उडान गर्नेछ । हाललाई निगमले प्रवद्र्धनात्मक भाडादर दुईतर्फी रु ७२ हजार ८०० र एकतर्फी रु ३७ हजार निर्धारण गरेको छ । नेपाल जापानको सिधा उडानलाई थप व्यावसायिक प्रवद्र्धन गर्न सेप्टेम्बर महीनाभर प्रत्येक उडानमा यात्रुहरुबीच गोलाप्रथा गराइनेछ र एक जनालाई उपहारस्वरूप एक निःशुल्क नेपाल जापान उडानको टिकट प्रदान गरिने निगमको विज्ञप्तिमार्फत जनाइएको छ
जापान सिधा उडान भएपछि पर्यटकको आगमन बढ्ने विश्वास गरिएको छ । कम्तीमा पनि वार्षिक ४० हजार पर्यटक भित्र्याउने निगमले जनाएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार जापानबाट सन् २०१८ मा २९ हजार ८१७ पर्यटक नेपाल आएका छन् । सन् २०१७ मा २७ हजार ३२६ पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका थिए ।जापानपछि चीन, साउदी अरब र दक्षिण कोरियामा उडानका लागि पहल भइरहेको निगमले जनाएको छ । ती मुलुकमा आगामी जनवरीदेखि उडान गर्ने गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।